Diplaomasia : Nisokatra indray ny masoivoho any Londres -
AccueilRaharaham-pirenenaDiplaomasia : Nisokatra indray ny masoivoho any Londres
Taorian’ny lanonam-panokanana ny tranon’ny masoivoho Malagasy any Londres no nanamarihan’ny Filoham-pirenena Malagasy teo anatrehan’ ireo mpanao gazety fa “hampahafantarina tsy hoe ela ireo masoivoho malagasy izay hiasa any Londres sy amin’ireo firenena hafa izay misy ny masoivohontsika Malagasy” . Noho izany dia aty Madagasikara izany no hampahafantaran’ny Filoha ny anaran’ireo izay ho voatendry honina sy hiasa any ivelany. Efa ela rahateo no efa niandrasana izany, saingy taorian’ny fanoloana ny minisitra vaovao dia tsy miandry ela tahaka ity tany londres ity izany ny fandrenesana azy ireo. Fa mikasika ny dian’ny Filoha tany Londres io ihany dia nihofahofa ao Londres indray ny sainam-pirenena Malagasy, raha ny marimarina kokoa ao 10 Grey Coat Place Victoria, nandritra ny omaly hariva. Nanao fanahy iniana mihitsy ny Filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina tamin’ ity diany any Londres ity, hitokana ny fisofakafan’ny masoivohon’i Madagasikara indray any an-toerana, ary hitokana izany amin’ny fomba ofisialy izay atrehan’ny masoivoho britanika izay miasa sy monina aty Madagasikara Thimothy Spencer Smart. Tafiditra indray ihany koa ity dian’ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina any Angletera ity amin’ny fanamarihana ny faha-200 taonan’ny fifandraisana ara-diplaomatika eo amin’ny firenena Malagasy sy ny firenena Anglisy. Nanipika ihany koa ny filoha Malagasy Hery Rajaonarimampianina ny maha zava-dehibe ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta, satria dia nandritra izay fifandraisana ara-diplaomatika izay dia mbola tsy nisy mihitsy ny fifandirana na ihany koa fidiran’ny firenena Anglisy tamin’ny raharam-pirenena malagasy. Nanamarika ihany koa ny Filoham-pirenena Malagasy fa nandritra ny fidiran’ny misionera Anglisy taty Madagasikara no nanampy betsaka tamin’ny fanombohan’ny fampianarana mamaky teny sy manoratra izay nankatoavin’ny mpanjaka Radama I tamin’izany fotoana, ary taty amin’ny taona 1880 kosa dia nanokatra ny kaonsily Malagasy taty Madagasikara izany hoe tao Toamasina ny firenena Anglisy .
Tsiahivina fa efa in-droa miantoana izay no nisy ny fikatonan’ny masoivoho Malagasy tao Londres. Ary izao miverina misokatra izao indray….nampahatsiahivin’ny filoha malagasy ihany koa ny maha zava-dehibe ny fisian’ny masoivoho iray any amin’ny firenena vahiny izay solontenan’ ny firenena ara-diplaomatika “ ny fanjakana iray dia tsy tokony hihonona fotsiny eo amin’ny fifandraisana raha ny ara-diplaomatika no resahina , satria dia manana anjara toerana lehibe izy ireo izay solontenan-pirenena any ivelany, na eo anivon’ny samy fanjakana izy ireo, na fikambanana tsy miankina izay mpiara-miombon-antoka amin’ny fampandrosoana”. Nanamarika noho izany ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa ireo mpiasan’ny masoivoho rehetra dia tokony ho samy tompon’andraikitra, ary amin’ny maha mpiasa diplaomaty azy ireo izay dia tokony miasa ho an’ny tombontsoan’ny firenena izy ireo sy miaro ihany koa ny zon’ ireo mpiray tanindrazana aminy izay miasa sy monina any Londres. Raha ireo izay tokony handrafitra kosa indray ny ekipana masoivoho iray dia ahitana mpiasa eo amin’ny valo eo ho eo, ny masoivoho izay ho tendrena izany , mpiandraiki-draharaha, fonksionera diplaomatika iray , mpiandraikitra ara-bola izay avy amin’ny minisiteran’ny vola sy ny fitantanam-bola iray , tompon’andraikitra ara-pitantanana sy ny ara-bola iray, sekretera iray ary mpamily iray.
Marihana fa delegasionina mafonja tahirin’ ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no niara-dalana taminy tamin’ity dia tany Londres ity, izay nahitana ny minisitra Henri Rabary-Njaka, Herilanto Raveloarison, Lanto Rasoloelison, Zafilahy Yng Vah , teo ihany kao ireo parlemantera izay nahitana an’i Milavonjy Philobert , Ravahimanana Guillaume ,Solange Angele ,Olivier Rakotovazaha, Bemahatana. Ankilany dia feno dia feno tokoa ny fandaharam-potoanan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina any an-toerana, satria mbola hisy ny fandraisany anjara amin’ny fotoana politika ao amin’ny lapan’ny panjakana ao Buckingham, sy eny amin’ny parlemanta ary ny fotoana ekonomika Madagasikara Trade and investisment forum sy ny London stock exchange.
Lambo T.(Londres, Grande Bretagne)